Sergio Ramos vs Real Madrid… (Boqol maalmood oo dagaal ah) – Gool FM
Bayern oo u jartay Barcelona tikitkeeda Europa League & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa laga ciyaaray tartanka UCL… SAWIRRO
UCL: Chelsea oo ku hungowday inay hoggaanka u qabato Guruubkeeda, xilli Kean uu ka yeelay Kooxdiisa Juventus inay kaalinta koowaad ku soo baxdo… +SAWIRRO
Sergio Ramos vs Real Madrid… (Boqol maalmood oo dagaal ah)
Haaruun March 23, 2021
(Madrid) 23 Maarso 2021. Iyadoo uu is gurayo waqtiga ka harsan qandaraaska Sergio Ramos iyo Real Madrid mideynaya, misena ma muuqato rajo isku soo dhoweyneysa labada dhinac.
Waxaa la galay 100-kii maalmood ee ugu dambeeyay heshiiska kabtanka Los Blancos uu kula jiro naadigiisa, waxaana sii xumaaneysa rajada uu qalinka ku dul dhigi karo waraaqda heshiiska kaddib markii uu ku qanci waayay yabooh uu ka helay Madaxweyne Florentino Perez.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la saadaalinayaa in uu dhammaan karo xiriirkii soo bilawday sanadkii 2005, maadaama dhammaadka xilli ciyaareedkan uu dhici doono qandaraaska Ramos uu kula joogo kooxda ka dhisan caasimadda Spain.
Dhaqdhaqaaq la’aanta madaxweynaha Real Madrid ayaa dardar gelineysa in Ramos uu ka gacan seero dalabka miiska u saaran ee uusan wali ka jawaabin, maadaama difaacan uu doonayo qandaraas sanado badan ah sidoo kalena aanan laga dhimin mushaharkiisa, maadaama maamulka kooxdu ay usoo jeediyeen inuu 10% dhimo mushaharkiisa.
Dhanka kale, ma jirto jawaab uu ka bixiyay halyeyga Isbaanishka yabooha miiska u saaran, taasoo ka dhigan in wali miiska wada xaajoodka la isugu imaan karo si loo gaba-gabeeyo in xiddigan qalinka ku duugo heshiis cusub sida uu Ramos xaqiijiyay toddobaadkii hore.
Majaladda Marca ee kasoo baxda magaalada Madrid ayaa daabaceysa in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo kabtanka xulka qaranka Spain iyo madaxweynaha Real Madrid, iyadoo taasi caddeyn looga dhigi karo maadaama mudane Perez uusan yabooha soo raacinin waqti uu dhacayo oo uu la laabanayo.
Sidaas darteed, 100-ka maalmood ee ka harsan muddada heshiiska Sergio Ramos ayaa laga filan karaa natiiyin kala duwan, iyadoo Madrid ay dhexda u xiraneyso soo xero gelinta baddelkiisa oo loo arko inuu yahay David Alaba haddii Ramos iyo maamulka kooxda ku fashilmaan inay heshiis isku af gartaan.
Griezmann oo hor istaagay inay Barcelona dib ula soo saxiixato Neymar Jr
Rashford iyo Haaland oo hoggaaminaya xiddigaha ugu qaalisa kubadda cagta... (Messi iyo Ronaldo oo ka maqan 20-ka sare, & Vinicius oo noqday xiddiga ugu qiimaha badan Real Madrid)